Misy ny fandraisana an-tanana isaky ny hopitaly: tokony hoentina eny amin’ny toeram-pitsaboana ny fanaintainana | NewsMada
Misy ny fandraisana an-tanana isaky ny hopitaly: tokony hoentina eny amin’ny toeram-pitsaboana ny fanaintainana
Par Taratra sur 16/10/2018
« Tokony hoentina manatona mpitsabo ny fanaintainana miseho amin’ny vatana fa tsy mijanona fotsiny ao an-trano satria mety ho fambara aretina, na zavatra hafa tsy mety ao anatiny », hoy ny filohan’ny komity miady amin’ny fanaintainana (Clud) ivondronan’ny mpitsabo mandray an-tanana ny fanamaivanana ny fanaintainana eto amin’ny CHU HJRA, ny profesora Rakotoarison Nicole, omaly, teny amin’ny HJRA. Fantarina koa ny aretina, na tranga mety hitarika ny fanaintainana ary mila raisina an-tanana miaraka ny fitsaboana roa. « Misy karazany roa ny fanaintainana ka arakaraky ny fitrangany sy ny halaliny no itondrana ny fitsaboana sahaza », hoy ny mpitsabo misahana ny ivontoeram-pirenena miady amin’ny fanaintainana ao amin’ny HJRA, Randriamisaina Isthman. Voalohany ny fanaintainana fohy ny fivoarany, faharoa ny fanaintainana lavareny efa nivoatra nandritra ny volana, na taona maromaro. Ho an’ny karazany voalohany, matetika efa voaray an-tanana eny amin’ny sampana vonjy taitra ny fanamaivanana ny fanaintainana rehefa mitranga. Maharitra kosa ny fitsaboana ny fanaintainana lavareny ary ampifangaroana ny fanafody sy ny fomba hafa, toy ny kinésitherapie. Fitaovana iray ampiasana koa eny amin’ny ivontoeram-pirenena miady amin’ny fanaintainana ny milina kely mamokatra herinaratra hanamaivanana ny fanaintainana (neurostimulateur transcutané TENS). Isan-kerinandro, 45 ny olona manatona ny ivontoerana mizaha fahasalamana sy manaraka fitsaboana.
Mety maharitra aman-taony ny fitsaboana ny fanaintainana, arakaraka ny fitrangany sy ny halaliny. Ilaina arahina izany, tsy hametraka olana maharitra ho an’ilay marary ka hisy fiantraikany amin’ny fiainany andavanandro. Izay no antony nametrahana ny Clud isaky ny hopitaly handray an-tanana ny fitsaboana miaraka amin’ny fikambanana Douleurs sans Frontières manohana ny asa rehetra sy mampirisika ny fametrahana ny clud ho an’ny toeram-pitsaboana mbola tsy manana.
Nomarihina, omaly, teny amin’ny HJRA ny Andro maneran-tany iadiana amin’ny fanaintainana nokarakarain’ny Clud amin’ny CHU Analamanga. Nisy ny fizahana maimaimpoana sy fanoroana hevitra ny marary tonga manana fanaintainana, nandritra ny tapakandro maraina. Teo koa ny fanofanana faha-16 ho an’ny mpianatra ho mpitsabo sy ny « paramédicaux » amin’ny fandraisana an-tanana ny fanaintainana.